Xigasho.net Ciidamada Kenya Oo Si Bareer ah u Toogtay Sarkaal katirsanaa Ciidama Xooga Dalka - Xigasho.net
Ciidamada Kenya Oo Si Bareer ah u Toogtay Sarkaal katirsanaa Ciidama Xooga Dalka
Warar kala duwan ayaa naga soo gaaraya gobalka gedo kuwaa oo ku waramaya in ciidamo katirsan kuwa Militariga Kenya in saakay ilaa xalay ay dhaq dhaqaaq ciidan ka wadeen degmada Ceelwaaq, kuwaa oo la sheegay in aysan dhaq dhaqaaqaasi ka war qabin ciidamada xooga Dalka ee ku sugan gobalka Gedo.
Dadka deegaanka oo lasoo xiriiray Idaacada Simba ee Muqdisho ayaa inoo sheegay in ciidamo katirsan kuwa dowladda kenya ay xalay gudaha usoo galeen degmada Ceelwaaq ee gobalka gedo, halkaasi oo ciidamadii xooga Soomaaliyeed ee ku sugnaa kenyaatiga ku amreen iney galaan xeryahooda, kadibna ay halkaasi ka sameeyeen howlgalo la sheegay in askarta kenya kaligood ay ka fushadeen gudaha ceelwaaq.
Ilo lagu kalsoon yahay oo ku sugan gudaha degmada ayaa Simba u sheegay in ciidamada kenya ay ku dhaqaaqeen tacadiyado kala gedisan maadaama ciidamadii xooga soomaaliyeed ay ku amreen ineysan sameynin wax dhaq dhaqaaq ah oo ay gudaha u galaan xeryahooda ilaa amar danbe.
Wararka ayaa intaa ku daraya in ciidama kenya marka ay ka dhamadeen degmada oo ay ka fushadeen danihii ay marka hore usoo galeen, iney u baxeen dhanka xuduuda laba dal soomaaliya iyo kenya ay wadagaan, halkaasi oo la sheegay iney kusoo socdeen kolonyo katirsan ciidamada xooga dalka oo loo soo sheegay in ciidamo kenyaan ah ay la wareegeen degmada ceelwaaq, balse ciidamadii xooga oo aan soo gaarin degmada ayaa waxaa wadada u galay ciidamadii kenya ee kasoo baxay degmada ceelwaaq.
Dagaalka dhax maray ciidamada kenya iyo kuwa xooga dalka ayaa la sheegay in uu halkasi ka dhashay qasaare soo gaaray ciidamada dowladda ee weerarka gaadmada ahaa kala kulmay ciidamada militariga kenya ee weerarka dhaba galka ah ku sameeyay ciidamada xooga, halkaasina uu ku geeriyooday sarkaalkii hogaaminayay ciidamada dowladda ee la kulmay weerarka dhaba galka ahaa.
Gudoomiye ku Xegeenka degmada Ceelwaaq Sahal Macalin Aadan oo la hadlay Idaacada Simba ee magaalada muqdisho ayaa faah faahin ka bixiyay weerarka lagu dilay Maxamed yuusuf oo ahaa Sarkaalkii hogaaminayay kolanyada ciidamada xooga dalka ee weerarka dhaba galka ahaa ay u dhigeen ciidamada militariga dowlada kenya, ayaa la sheegay markii danbe ay meedkiisa sarkaalka hore u qaaten keenyaatiga, halka ciidamadii sarkaalka uu hogaaminayay ayaa la sheegay iney u baxsadeen fariisimahii ay kasoo baxee, markii ay u suura gali weysay iney u babac dhigan ciidamada militariga dowladda kenya.
Waxii kusoo kordha Kala Soco www.SimbaNews.cm